Raw Nandrolone Propionate ntụ ntụ (7207-92-3) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Nandrolone ntụ ntụ Usoro / Nandrolone propionate ntụ ntụ
SKU: 7207-92-3. Categories: Nandrolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nhazi nke Nandrolone Propionate powder (7207-92-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Nandrolone Propionate ntụ ntụ video
Nandrolone Propionate ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Nandrolone Propionate ntụ ntụ
Molekụla Formula: C21H30O3
Ọbara arọ: 330.4611
Melt Point: 453.6 Celsius C na 760mmHg
Nandrolone Propionate ntụ ntụ ojiji na usoro steroid
Nandrolone Propionate ntụ ntụ, nke Nandro P, Nandro Prop na-akpọ.
Nandrolone Propionate ntụ ntụ Usage
Nandro (Nandrolone Propionate raw powder) na-egosi maka ọgwụgwọ anaemia, breastcinoma breast, epioedema ha, antithrombin III deficiency, excess fibrinogen, ọdịda ọdịda na ọrịa Turner na prophylaxis nke angioedema.Nandro (Nandrolone Propionate powder). ugboro ise kwa izu.Ọ bụrụ na ọ dị elu, ọ nwere ike ịbawanye ụba ugboro ugboro, mana nke a ka bụ ọgwụ ọjọọ.
Ịdọ aka ná ntị na Nandrolone Propionate ntụ ntụ
Enwere oke ọrụ ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị nwere ike ịpụta mgbe ha ji ajị anụ, akpụ, olu na-agbaji, hypertrophy gọọmenti, ụbụrụ amorrhea ma ọ bụ nsogbu nke nwoke. Ọ bụrụ na ọ na-eme, kwụsị ọgwụ ozugbo. Ngwa ngwa-ngwa nwere ike ime ka ụbụrụ jaundice na ọrịa imeju. enwere ike ime ka sodium retaining water na edema.
Nandrolone Propionate ntụ ntụ weere site na ọtụtụ ndị kasị mma steroid maka nwoke na-eji (mmetụta utịp vs. nsonaazụ) Nandro (Nandrolone Propionate raw ntụ ntụ) a na-ajụkarị ugboro anọ na ugboro ise kwa izu. Na ego a, mgbanwe nke estrogen bụ ntakịrị ka gyno enweghị nsogbu. Ihe mgbagwoju anya bu kwa nsogbu na nza enzymes, mgbali elu ma obu cholesterol. Ekwesiri ighota na n'afo HIV, nandrolone egosiputa na obughi nani na o di irè n'igbu ndi mmadu aru ma oburu na ha bara uru na usoro ogwu ahu. N'ihi na ndi Nburo (Nandrolone Propionate powder) nwere ike ime nke oma. tinye na ma uka ma na-egbutu cycles.Ọ dị mfe na imeju ma na-akwalite ọdịdị dị mma na ike nweta mgbe ọ na-ebelata abụba ahụ.
Nandrolone Propionate Raw ntụ ntụ
Nandrolone Propionate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Nandrolone Propionate ntụ ntụ si aasraw
AASRaw na-enye aka ọcha 98% Nandrolone Propionate raw powder to bodybuilders ma ọ bụ
labs na-echekwa maka ogwu ogwu.
Nandrolone Propionate Raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
1 nyochaa maka Nandrolone propionate ntụ ntụ
Nandrolone propionate ntụ ntụ bụ ihe ọmụma